Dhulku wuxuu ku tiirin karaa dhidibkiisa: sababaha iyo cawaaqibka | Shabakadda Saadaasha Hawada
Dhulku wuxuu ku tiirin karaa dhidibkiisa
Jarmal Portillo | 21/06/2022 10:00 | Ciencia
Meeraheena waxa la rogay 84 milyan oo sano ka hor markii dinosaurs ay dhulka ku socdeen. Si sax ah, dhacdo la yiraahdo isbeddelka cirifka dhabta ah ayaa dhacda, oo awood u leh inay beddesho rabitaanka jidhka samada ee dhinaca dhidibkiisa oo keenaya "gariir". Waxaa jira daraasado qaar oo taas xaqiijinaya dhulku dhidibkiisa ayuu ku tiirin karaa taasina waxay keeni kartaa dhibaato wayn oo soo food saarta bini'aadamka iyo nolosha sida aynu ognahay.
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u hibeeyay inaanu kuu sheegno sida dhulku u soo jeedin karo dhidibkiisa iyo cawaaqibka uu yeelan karo.
1 Dhulku wuxuu ku tiirin karaa dhidibkiisa
2 Daraasado ku saabsan in dhulku ku tiirin karo dhidibkiisa
3 Sharaxaad cilmiyaysan
Isbeddelka cirifka dhabta ahi wuxuu yimaadaa marka juqraafi ahaan dhulka woqooyi iyo tiirarka koonfureed si weyn isu beddelaan, taasoo keenta qolof adag inay u rogto gogosha sare ee dareeraha ah ee ilaalinaysa xudunta. Dhulka birlabeedka iyo nolosha dhulka midna ma saameyn, laakiin dhagaxa barakiciyay wuxuu duubay qaska qaab xogta paleomagnetic.
"Bal qiyaas inaad dhulka ka eegayso meel bannaan," ayuu yiri Joe Kirschvink, khabiir ku takhasusay cilmiga farsamada ee Tokyo Institute of Technology ee Japan, iyo mid ka mid ah qorayaasha. "Dhaqdhaqaaqa cirifka dhabta ah wuxuu siinayaa aragtida ah in meeraha uu u janjeero hal dhinac, marka waxa dhab ahaantii dhacaya ay tahay in dusha sare ee dhagaxa ah (maro adag iyo qolof ah) ay ka sarreeyaan marada dareeraha ah iyo agagaarka xudunta dibadda" .
"Dhagaxaan badan ayaa duubay hanuuninta goobta magnetic maxalliga ah markii ay sameeyeen, oo la mid ah sida cajaladdu u duubto muusigga," machadka ayaa ku sharaxay bayaan. Tusaale ahaan, kirismaska ​​magnetite yar ee sameysma magnetosomes waxay caawiyaan bakteeriyada kala duwan in ay isu jeediyaan oo ay si sax ah ula jaan qaadaan tiirarka magnetic. Sida ay dhagaxyadu u adkeeyeen, waxay noqdeen kuwo xayiran oo waxay sameeyeen " irbadaha kombuyuutar ee microscopic ," oo tilmaamaya meesha uu tiirku ahaa iyo sida uu u socday intii lagu jiray Cretaceous dambe.
Sidoo kale, diiwaankan magnetic field wuxuu noo ogolaanayaa inaan ogaano sida uu dhagaxu uga fog yahay cidhifka: cirifka waqooyi, haddii ay si qumman u taagan tahay, waxay ka dhigan tahay inay ku taal tiirka, haddii ay tahay mid jiif ah, taas oo dhigaysa dhulbaraha. Isbeddel ku yimaadda jihaynta lakabyada u dhigma isla waagii ayaa tilmaamaya in meeraha "ku dhufo" dhidibkiisa.
Daraasado ku saabsan in dhulku ku tiirin karo dhidibkiisa
Si loo helo calaamadaha dhacdadan, qoraa kale, Professor Ross Mitchell oo ka tirsan machadka Geology and Geophysics ee magaalada Beijing, Shiinaha, ayaa dib u xusuustay meel ku habboon oo uu ku falanqeeyay arday ahaan. Tani waa harada Apiro, oo ku taal buuraha Apennine, ee bartamaha Talyaaniga, halkaas oo dhagaxa nuuradda la sameeyay wakhtiga saxda ah ee ay xiiseynayeen baaritaanka: inta u dhaxaysa 1 iyo 65,5 milyan sano ka hor, taariikhda qiyaasta ah ee dabar goynta dinosaurs.
Iyadoo ay wadataa mala-awaalka dhabta ah ee dabaylaha, xogta laga soo ururiyay dhagaxa nuuradda Talyaaniga ayaa soo jeedinaysa in dhulku u janjeero ilaa 12 darajo ka hor inta uusan is saxin. Ka dib marka la leexiyo, ama "duubidda", meeraheena koorsada ayaa isbeddelay oo ugu dambeyntii sawiray arc ku dhawaad ​​25°, kaas oo ay qorayaashu ku qeexeen "cafis buuxa" iyo "cosmic yo-yo" oo soconaya ilaa 5 milyan oo sano.
Cilmi-baaris hore ayaa beenisay suurtagalnimada in uu socdo baadi-goob dhab ah dhammaadka xilliga Cretaceous, oo ku sharmaaya xasilloonida dhidibka dhulka 100kii milyan ee sano ee la soo dhaafay, "iyada oo aan xog ku filan laga soo ururin diiwaanka juqraafiga," qorayaasha wargeyska ayaa xusay. "Taasi waa mid ka mid ah sababaha daraasaddan iyo hantideeda xogta quruxda badan ee paleomagnetic aad u soo kicinaysa," geophysicist Richard Gordon oo ka tirsan Jaamacadda Rice ee Houston ayaa ku daray faallooyinka.
Dhulku waa dhul lakabyo leh oo dhexda u ah bir adag, dareere bir ah oo dibadda ah, iyo maro iyo qolof adag oo ka taliya oogada aynu ku noolnahay. Dhammaantood waxay u wareegaan sida dusha sare, hal mar maalintii. Sababtoo ah Xudunta sare ee dhulku waa dareere, marada adag iyo qolofku way simbiriirixan karaan. Dhismayaasha cufan ee u dhow, sida hoos-u-dhigga taarikada badda iyo foolkaanaha waaweyn sida Hawaii, waxay door bidaan inay u dhowaadaan dhulbaraha.
Iyadoo ay jirto barakaca qolofka ah, dhulka birlabeedka dhulka waxa ka dhasha qulqulka birta dareeraha ah ee Ni-Fe ee xudunta dibadda. Miisaanka wakhtiga dheer, dhaqdhaqaaqa gogol-dhaafka ah iyo qolofku ma saameeyaan xudunta dhulka, sababtoo ah lakabyada dhagaxyada ee korka kaca ah waxay si cad u yihiin goobta magnetic Earth. Taa baddalkeeda, qaababka isku dhafka ah ee xudunta dibadda ayaa lagu qasbay inay ku dheesho hareeraha wareegga wareegga dhulka, taasoo la macno ah in qaabka guud ee dhul magnetic field waa la saadaalin karaa. ku fidsan si la mid ah sida feylasha birta ay saf ugu jiraan ulo birlabeedka yar yar.
Markaa xogtu waxay siinaysaa macluumaad aad u fiican oo ku saabsan jihada juqraafiyeed ee tiirarka woqooyi iyo koonfurta, leexashaduna waxay siinaysaa fogaanta tiirarka (goobta toosan waxay ka dhigan tahay inaad ku jirto tiirarka, bannaanka jiifka macnaheedu waa inaad ku sugan tahay dhulbaraha). Dhagaxyo badan ayaa duuba jihada meelaha magnetic maxalliga ah marka ay sameysanayaan, sida cajalad duubista muusigga. Tusaale ahaan, kiristaalo yaryar oo magnetite macdanta ah oo ay soo saarto bakteeriyada qaar ayaa dhab ahaantii u taagan sida irbado kombuyuutar oo yaryar ah oo waxay noqdaan kuwo ku xayiran saddax marka dhagaxu sii adkeeyo. Magnetism-kan "fossil" waxa loo isticmaali karaa in lagu ogaado halka dhidibka wareeggu u dhaqaaqay marka loo eego qolofta Dhulka.
"Bal qiyaas in aad dhulka meel bannaan ka eegayso," ayuu yidhi qoraaga daraasadda Joe Kirschwenk oo ka tirsan Machadka Teknolojiyadda ee Tokyo, halkaas oo ELSI ay saldhig u tahay. "Dhaqdhaqaaqa cirifka dhabta ah wuxuu u eg yahay dhulku inuu u janjeero hal dhinac, marka waxa run ahaantii dhacayaa ay tahay dhammaan qolofka dibadda ee dhagaxa ah ee Dhulka (maro adag iyo qolof) oo ku wareegaya agagaarka xudunta dareeraha ah." Dhaqdhaqaaqa cirifka dhabta ah ayaa dhacay, laakiin Cilmi-yaqaannadu waxay sii wadaan inay ka doodaan in wareegyada waaweyn ee marada iyo qolofta dhulka ay dhaceen wakhti hore.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka ogaan karto in dhulku uu soo jeedin karo dhidibkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Dhulku wuxuu ku tiirin karaa dhidibkiisa
Goorma ayaa Spain ka jirtay aurora borealis?